भवन ब्लक यौगिकहरू, जैविक र औषधि रसायनिक पदार्थ, सामग्री र उत्प्रेरक मध्यस्थ आपूर्तिकर्ता र निर्माता - Huiheng रसायन टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड।
हामीलाई कल गर्नुहोस् +86-15261884378
भवन ब्लक यौगिकहरू
प्राकृतिक उत्पाद मध्यवर्ती
हेटेरोसाइक्लिक बिल्डिंग ब्लकहरू
अर्गानिक भवन ब्लकहरू
जैविक र औषधि रसायन
अवरोध रिसेप्टर एगोनिस्ट
सामग्री र उत्प्रेरक मध्यवर्ती
सामग्री विज्ञान मध्यवर्ती
उत्प्रेरक र Ligand मध्यवर्ती
Huiheng (नानजिंग) केमिकल टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
Huiheng केमिकल टेक्नोलोजी सीएमओ (अनुबंध विनिर्माण संगठन) र CDMO (अनुबंध विकास र निर्माण संगठन) मा १० बर्ष भन्दा बढी अनुभव छ। यसको पूर्ववर्ती नानजिंग हx्गक्सियांग रसायनमा फिर्ता पत्ता लगाउन सकिन्छ। पर्याप्त उद्योग अनुभव र एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास टोलीले हामीलाई बनाउँछ हामी अधिक र अधिक विश्वव्यापी ग्राहकहरु संग दीर्घकालीन र स्थिर सहकारी सम्बन्ध स्थापना गरेका छौं।
हामीसँग १,००० भन्दा बढी वर्ग मिटर आर एण्ड डी प्रयोगशालाहरू र जीएमपी प्रमाणित मापन अनुबंधित उत्पादन कार्यशालाहरू छन्, जसले उत्पादन विकास र उत्पादनलाई ग्रामदेखि टनसम्म प्रदान गर्न सक्दछ।
हाम्रो मुख्य उत्पादनहरूमा पर्दछ: विशेषता हेटेरोसाइक्लिक यौगिकहरू, पाइपेरिडिन श्रृंखला, पाइराइडिन श्रृंखला, ट्राइसिक्लिक श्रृंखला, स्पिरो श्रृंखला, अवरोध गर्नेहरू / रिसेप्टर एगोनिस्टहरू, आदि।
हामीसँग वैज्ञानिकहरूको एक अनुभवी टोली छ जोसँग ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक दक्षता र उत्साह छ। थप रूपमा, हामीले प्रख्यात घरेलु विश्वविद्यालयका रसायन विज्ञान प्रोफेसरहरूको टोलीसँग पनि घनिष्ट सहकारी सम्बन्ध स्थापित गरेका छौं। उनीहरूले हामीलाई हाम्रो अनुकूलित संश्लेषण प्रक्रियाको लागि उपयोगी सैद्धान्तिक र प्राविधिक समर्थन पनि प्रदान गर्छन्।
एक नयाँ मुकुट निष्क्रिय भ्याक्सिन मार्केट गरीएको छ र चीन मा प्रयोग गरीएको छ2021/06/10
निष्क्रिय कोरोनाभाइरस खोप स्वतन्त्र रूप मा चिकित्सा जीवविज्ञान को संस्थान, चिनियाँ चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित (पछि जीव विज्ञान को संस्थान, चिनियाँ चिकित्सा विज्ञान को प्रतिष्ठान को रूप मा उल्लेख गरीएको छ) कोरोनाभाइरस निष्क्रिय खोप को पहिलो ब्याच चीन मा आपतकालीन उपयोग को लागी बिक्री गर......
कसरी अर्डर गर्ने
छनौटको लागि धन्यवादहुइहेng्ग (नानजिंग).
हुइहेng्ग (नानजिंग) offers and sells research chemicals for laboratory use to legal entities only.
हामीसँग तपाईंसँग सम्पर्कमा रहनको लागि हामीले विभिन्न तरिकाहरू प्रस्ताव गरेका छौं।
तपाईले फोन, QQ, WeChat, ईमेल मार्फत अर्डरहरू राख्न सक्नुहुन्छ।
हामीलाई तपाईंको अर्डर प्रशोधन गर्न निम्न जानकारी आवश्यक छ:
१. उत्पादको नाम / क्यास नम्बर, संरचना र मात्रा।
२. तपाईंको कम्पनीको जानकारी र ईमेल ठेगाना (हामी तपाईंलाई अर्डर कन्फर्मेसन र अपडेट पठाउनेछौं।)
Your. तपाईंको नाम र टेलिफोन नम्बर
Shi. ​​ढुवानी ठेगाना र बिलि address ठेगाना
हाम्रो बिक्री विभाग तपाईंलाई आवश्यक हुन सक्ने कुनै पनि जानकारीको लागि मद्दत गर्न इच्छुक छ,
वा ईमेल पठाउनुहोस्: बिक्री @ huiheng9chem.com / huihengnjchem @ 163.com।
कुनै वस्तुको लागि तपाईं खरीद गर्न चाहानुहुन्छ जुन हाम्रो सूचीमा सूचीबद्ध छैन, कृपया हाम्रो बिक्री विभागलाई विस्तृत जानकारी पठाउनुहोस् उद्धरण प्राप्त गर्न।
सहयोगी जानकारीमा क्यास #, संरचना, रासायनिक नाम, मात्रा, शुद्धता, तपाईंलाई कति समय सामग्रीको आवश्यक हुन्छ, साथै तपाईंलाई आवश्यक हुने थप थप विवरणहरू समावेश हुन सक्छ।
बिक्री कोटिस र कोटेशन को सर्त
हाम्रो सूचीमा त्यहाँ कुनै मूल्य दिइएन। वर्तमान कोटेशनहरू हाम्रो सम्पर्क पृष्ठबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रस्तावहरू ग्राहकलाई २-4--48 घण्टा भित्र फर्काइन्छ। हाम्रो प्रस्ताव को वैधता १० दिन छ।
धेरै जसो रसायनहरूको लागि, हामी%%% + सामग्री प्रदान गर्न सक्दछौं, जबकि सानो अंश% +% + सामग्री हुन्छ। यदि ग्राहकसँग सामग्रीको लागि बिभिन्न आवश्यकताहरू छन्, तिनीहरू सम्झौतामा वर्णन गर्न सकिन्छ। यसको संरचना र शुद्धता NMR, HPLC वा LC / GC-MS द्वारा पुष्टि भयो।
भुक्तानी सर्तहरू सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि २ hours घण्टा भित्र -०-50०% जम्मा हुन्छन्। हामीले कम्पाउन्डहरू र NMR, HPLC वा LC / GC-MS उत्पादन गरेपछि, ग्राहकले बाँकी रहेको रकम भुक्तान गर्न आवश्यक छ, र हामी बाँकी भुक्तानीको प्राप्तिमा ढुवानीको व्यवस्था गर्नेछौं।
हाम्रा धेरै उत्पादनहरू वातावरणीय तापक्रममा पठाइन्छन्। परिवेशको तापमानमा छोटो अवधिको जोखिमले उत्पादको गुणवत्तालाई असर गर्दैन।
छोटो अवधिको जोखिम र परिवेशको तापक्रम बाहेक अन्य सर्तहरू आवश्यक पर्ने केही उत्पादनहरूका लागि हामी यी अभिकर्मकहरू फ्रिजहरूसँग जहाजलाई गिरावट रोक्नको लागि पठाउँछन्।
भवन २, न।,, हेन्से Road्ग रोड, आर्थिक विकास क्षेत्र, गाउचुन जिल्ला, नानजिing शहर, जिian्सु प्रान्त
प्रतिलिपि अधिकार २०२० Huiheng (Nanjing) केमिकल टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड सबै अधिकार सुरक्षित।
सबै रसायनहरू अनुसन्धान र विकास मात्र प्रयोगको लागि हो। नियन्त्रित उत्पादनहरू चिनियाँ कानूनहरू र खरिदकर्ता देश / क्षेत्र नियमहरूको पालना गर्दछ।